Job 14 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
14 “Mmadụ nke nwaanyị mụrụ,+Ndụ ya na-adị mkpụmkpụ,+ jupụtakwa ná nsogbu.+ 2 Ọ pụtawo dị ka okooko osisi, e wee bipụ ya,+Ọ na-agafekwa ọsọ ọsọ dị ka onyinyo,+ ọ naghịkwa adịgide. 3 Ee, i meghewo anya lekwasị onye a,I mewo ka mụ na gị baa n’ikpe.+ 4 Ọ̀ dị onye na-adịghị ọcha nke pụrụ ịmụ onye dị ọcha?+Ọ dịghị. 5 Ọ bụrụ na e kpebiwo ụbọchị ole ọ ga-adị ndụ,+Ọnwa ole ọ ga-adị ndụ dị gị n’aka;Ị kpaworo ya ókè ka ọ ghara ịgabiga ya. 6 Wepụ anya n’ebe ọ nọ ka o zuru ike,+Ruo mgbe ụbọchị ya ga-atọ ya ụtọ otú o si atọ onye ọrụ e goro ego. 7 N’ihi na ọbụna osisi nwere olileanya.Ọ bụrụ na e gbutuo ya, ọ ga-epulite ọzọ,+Ọ dịghịkwa mgbe ọ na-agaghị enwe ome. 8 Ọ bụrụ na mgbọrọgwụ ya emee ochie n’ime ala,Ọ bụrụkwa na úkwù ya anwụọ n’ime ájá, 9 Mgbe mmiri metụrụ ya, ọ ga-epulite,+Ọ ga-awakwa alaka dị ka osisi pulitere ọhụrụ.+ 10 Ma dimkpa na-anwụ wee tọgbọrọ dị ka onye e meriri emeri;Mmadụ na-ekubi ume, ma olee ebe ọ nọ?+ 11 Mmiri na-ata n’oké osimiri,Mmiri na-asọpụcha n’osimiri, o wee takọọ.+ 12 Mmadụ na-edina ala, ma ghara ibili.+Ha agaghị ebili ruo mgbe eluigwe na-agakwaghị adị,+A gaghịkwa akpọte ha n’ụra.+ 13 A sị nnọọ na ị ga-ezobe m na Shiol,+Na ị ga-ezobe m ruo mgbe iwe gị dajụrụ,Na ị ga-ekpebi oge m ga-anọru,+ i wee cheta m!+ 14 Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ọ̀ pụrụ ịdị ndụ ọzọ?+M ga-echere ruo ogologo oge niile a manyere m ichere,*+Ruo mgbe a ga-eme ka m nwere onwe m.+ 15 Ị ga-akpọ òkù, mụ onwe m ga-azakwa gị.+N’ihi na agụụ ọrụ aka gị ga-agụsi gị ike. 16 Ma ugbu a, ị na-agụ nzọụkwụ m ọnụ;+Ọ dịghị ihe ọzọ ị na-ele anya ya ma ọ́ bụghị mmehie m.+ 17 E kechiwo nnupụisi m n’akpa,+I jikwa mgbá nyagide mmehie m. 18 Otú ọ dị, ugwu ga-ada, ọ gaghị adịkwa,A ga-ebupụkwa ọbụna oké nkume n’ebe ọ dịbu. 19 Mmiri na-erichasị ọbụna nkume;Idei ya na-asachapụ ájá dị n’ala.Otú ahụ ka i bibiworo olileanya nke mmadụ efu. 20 Ị na-emeri ya ruo mgbe ebighị ebi, o wee ghara ịnọkwa;+Ị na-eme ka ihu ya gbanwee, i wee zipụ ya. 21 A na-akwanyere ụmụ ya ùgwù, ma ọ dịghị ama;+Ha na-aghọ ndị a na-ejighị kpọrọ ihe, ma ọ dịghị echebara ha echiche. 22 Ọ bụ naanị na anụ ahụ́ ya ga na-egbu ya mgbu mgbe ọ ka kpuchiri ya,Mkpụrụ obi ya ga na-erukwa uju mgbe ọ ka dị n’ime ya.”
^ Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ ‘ịrụ ọrụ.’